Sideen Uga Hortagaa Isticmaalayaasha Soo Dejinta Faylasha? - Liiska Faylka fudud
Sideen uga hor-istaagaa Isticmaalayaasha inay soo degsadaan faylasha?
Waxaa laga yaabaa 13, 2020 February 20, 2020 by Mitch
Inbadan waxay isweydiinayeen sida dadka loogu tuso feylashahooda, laakiin looma ogola inay u soo guuriyaan nuqulada naftooda. Tani waxay u egtahay codsi macquul ah.
Nasiib darrose, kama hortagi kartid tan. Waad ka hortegi kartaa gelitaanka faylasha gadaashiisa galitaanka, laakiin marka aad shaaca ka qaaddo waxa ku jira faylka, waa la koobiyeyn karaa.
Waxaan u adkayn karnaa isticmaaleysa, sida ka hortagga iskuxirka kulul, qulqulka fiidiyowgeena ama curyaaminta saxda-gujinta, laakiin ugu dambeyntii kama hortegi karno waxyaabaha ku jira faylka in la koobiyeysto markii la arko.
Sawirkaani wuxuu muujinayaa feylasha ugu horreeyay ee lagu rakibay Firefox WordPress.com
Sideen Uga Hortagi Karaa URL-ka Tooska ah Si loo Helo Faylasha Muuqaaladayda Ka baxsan Websaydhadeyda?